Dota Plus, Guild နဲ့ MMR reset စနစ်တို့မှာ အပြောင်းအလဲကြီးများ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Valve – Gaming Noodle
Valve ဟာ Dota2အတွက် Fall Season update ကို မကြာသေးမီက ကြေညာခဲ့ပြီး ယင်း update အတွင်း Dota Plus, Guild နဲ့ MMR reset များအတွက် ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးများ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ Season သစ်ဟာ ယခုက စ လို့ ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းအထိ ကြာမြင့်မှာဖြစ်ကာ ယခု update နဲ့အတူ Valve ဟာ ၂၀၂၀ မကုန်ခင်ကာလအတွင်း ပြုလုပ်သွားမယ့် Dota2ဂိမ်းတွင်းအစီအစဉ်များအကြောင်းကိုလည်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
Valve ဟာ Dota Plus ကို ကစားသူများ ဝယ်ယူချင်အောင် ဆွဲဆောင်မှု အမြောက်အများ ထည့်သွင်းလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Dota Plus သမားများ shard နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်အောင် ယခုထည့်သွင်းပေးလိုက်တဲ့ treasure သစ်အတွင်းမှာ Nyx Assassin, Leshrac, Medusa, Vengeful Spirit, Weaver, Clockwerk, Faceless Void, Doom, Sven, Axe, Crystal Maiden နဲ့ Tusk item set သစ်များ၊ Ethereal နဲ့ Prismatic gems များ ပါဝင်တဲ့ rare Blazing Hatchling courier စ တာတွေ ပါဝင်လာပါတယ်။
Valve ဟာ Dota Plus သမားများအတွက် ယခုက စ လို့ ၃ လတစ်ခါ seasonal treasure သစ်တစ်ခုစီ ပုံမှန်ထည့်သွင်းပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အနီးဆုံးနောက်ထပ် seasonal treasure သစ်ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ ​ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး seasonal quest များနဲ့ seasonal terrain များကိုလည်း ၃ လတစ်ခါ အသစ်ထည့်သွင်းပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Fall seasonal quests များကို ပြုလုပ်သူများဟာ shard ပေါင်း ၅၇,၈၅၀ အထိ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Dota Plus သမားများဟာ ယင်းတို့ကို seasonal treasure များ ဝယ်ယူဖို့အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Dota Plus မဝယ်ထားသူbများလည်း shard များ ရနိုင်ပေမယ့် များများစားစားရရှိလိုသူများကတော့ Plus ကို မဖြစ်မနေဝယ်ယူထားသင့်ပါတယ်။
ကစားသူများအားလုံးဟာ Dota Plus မဝယ်ယူထားပေမယ့် Hero Level Five အထိ တင်နိုင်ကြတော့မှာ ဖြစ်ပြီး Silver tier နဲ့ အထက်ကိုရောက်ရှိလိုမှာသာ Plus ကို ဝယ်ယူရမှာပါ။ Plus မရှိသူများလည်း shard များကို tip ပေးနိုင်ကြတော့မှာဖြစ်သလို ၃ ပွဲနိုင် weekly shard reward အဖြစ် shard ၅၀၀ စီကိုလည်းရရှိကြမှာပါ။ Plus သမားများကတော့ shard ၁,၀၀၀ အထိ ရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Plus Rewards store ကို Shard Shop လို့ နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီး premium hero set များ၊ legacy hero set များနဲ့ tool များကို လွတ်လပ်စွာဝယ်ယူနိုင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် seasonal treasure၊ chat wheel sound effect များနဲ့ hero relic များကိုတော့ Plus သမားများသာ သီးသန့် ဝယ်ယူနိုင်မယ့် အရာများအဖြစ် ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။
Plus သမားများဟာ အသစ်ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ role assistant hero grid arrangement ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ကြမှာပါ။ ယင်းဟာ ranked role matchmaking အတွင်းက hero pick များကို အလိုလျှောက် မှတ်သားထားပြီး role တစ်ခုစီအတွင်း အများဆုံး pick ခံရတဲ့ hero များကို ပြန်လည်ပြသပေးမယ့်စနစ်ပါ။ ယင်းစနစ်အတွင်း MMR rank အရ ကန့်သတ်ကာ မိမိ ရောက်ရှိနေတဲ့ skill level ရဲ့ usage rate များကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dota Plus အတွင်း ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ အခြား feature များကတော့
1. Chat wheel sound effect များကို redeeming shard များနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်အောင်ပြုလုပ်လိုက်ခြင်း
2. ALT ကို ဖိပြီး အသုံးပြုနိုင်မယ့် pull timer ကို Plus သမားများအတွက် ထည့်သွင်းပေးလိုက်ခြင်း
3. ဂိမ်းပွဲအပြီး healing နဲ့ gold breakdown များကို Dota Plus damage tab နဲ့အတူ ထည့်သွင်းလိုက်ခြင်း
4. Battle Pass MVP feature ကို ကစားသူများအားလုံးအတွက် ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပြီး Plus သမားများအနေနဲ့ seasonal quest သစ်များကနေ shard အပိုများရရှိလာနိုင်ခြင်း
စတာတွေဖြစ်ပြီး Avoid Players list ကိုလည်း အများဆုံး ၁၆ ယောက်ကနေ ၂၅ ယောက်အထိ တိုးမြှင့် သတ်မှတ် ပေးလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Guild များနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြုပြင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပြီး တစ်ပတ်အတွင်းရရှိတဲ့ guild point များအရ ဖော်ပြမယ့် region အလိုက် weekly leaderboard များကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ယင်း leaderboard များဟာ အပတ်စဉ် update ပြုလုပ်နေမှာဖြစ်ပြီး ကစားသူများအနေနဲ့ guild rank အလိုက် shard reward များကို ရရှိလာနိုင်ကြမှာပါ။
ဒီနေရာမှာလည်း Plus သမားများဟာ ထုံးစံအတိုင်း ပုံမှန်ထက် shard ၂ ဆ ရရှိနေကြမှာပါ။ Valve ဟာ guild rank tier များအတွက် ကစားသမားများရရှိမယ့် reward များကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ် ပေးထားပါတယ်။
Guild contract များကနေ guild point များကိုသာမက shard များပါ ရရှိနိုင်ကြတော့မှာဖြစ်ပြီး Plus ကစားသမားများဟာ contract slot ၂ ခုရရှိမှာဖြစ်ကာ ရိုးရိုးကစားသမားများကတော့ ၁ ခုသာရရှိမှာပါ။ Guild specific challenge များကိုတော့ အနည်းဆုံး member ၃ ဦးပါဝင်တဲ့ party များနဲ့ ယခင်အတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Rank season သစ်ဟာလည်း ယခင်နဲ့စာရင် ပြောင်းလဲမှုများရှိလာပါတယ်။ ကစားသူများဟာ MMR reset ကို မိမိတို့ အလိုရှိတဲ့အချိန်မှ ပြုလုပ်လို့ရသွားပြီး Setting အတွင်း Account tab အောက်က MMR Recalibration setting မှာ activate လုပ်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူအများကြီးတစ်ပြိုင်တည်း recalibrate မပြုလုပ်နေစေဖို့အတွက် စတင်ချိန်များကိုလည်း အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့အတွင်း သတ်မှတ်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Valve ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း booster အကောင့်ပေါင်း ၁၄,၀၀၀ ကျော်ကို ban ခဲ့ကြောင်း၊ ဂိမ်းတွင်း toxicity နဲ့ ကစားပွဲရသပျက်စီးစေမယ့်အပြုအမူများကို ကိုင်တွယ်ဖို့လည်း ကြိုးပမ်း နေကြောင်း၊ ဒီအတွက် Dota2အတွင်းမှာ Overwatch ပုံစံ စနစ်သစ်တစ်ခုထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပြီး CS:GO အတွင်းကစနစ်နဲ့လည်း အနည်းငယ်ဆင်တူကာ ယခုအချိန်မှာတော့ အတိအကျ မကြေညာနိုင်သေးကြောင်း တို့ကိုလည်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ် တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
source: dotesports, Dota2blog